Tsy Fandraisana Anjara Avobe ary Fahatapahan’ny Fampahalalam-baovao tamin’ny Fifidianana tao Venezoela · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2018 16:56 GMT
Taorian'ny nitetezany an'i Karakas, tombanan'ny The Devil’s Excrement fa betsaka noho ny tamin'ny fifidianana monisipaly tamin'ny volana Aogositra lasa teo, izay 68% ny tahan'ny tsy fandraisana anjara, ny tahan'ny tsy fandraisana anjara nandritra ity fifidianana ity; isan-jatony izay tena avo be raha oharina amin'ny tahan'ny fandraisana anjara teo amin'ny tantaran'i Venezoela. Milaza i Devil's fa na any amin'ny faritra chavista nentim-paharazana aza, toa an'i Katia, toa ambany ny tahan'ny fandraisana anjara. Tsy misy filaharana eny amin'ireo toerana fifidianana any amin'ireo tanànan'ny mahantra sy mpiasa, toa an'i Petare sy Caricuao; raha toa ka toy ny nilaozana ny ambany tanàna toa i Karakas. (sary ao amin'ny weblaogy)
Nilaza ny blaogera iray avy amin'ny antoko mpanohitra izay nandeha nifidy – na teo aza ny fialan'ny maro tamin'ireo antoko mpanohitra fototra - fa nandeha tsara ny milina tao amin'ny foibe nifidianany, ka noho izany, niandry kely izy na tsy dia nisy mpifidy maro be aza nilahatra. Nilaza ihany koa i Rodolfo fa feno be ny fiangonana tamin'izany, na dia tsy fantany aza hoe nanatrika fotoam-pivavahana tsotra toy ny mahazatra fotsiny aza ve izy ireo sa namaly ny antson'i Sumate tamin'ny fanaovana fihetsiketsehana hanoherana ny fifidianana.
Vitsy dia vitsy ny blaogera mitatitra ny zava-mitranga any ivelan'i Karakas. Mitatitra fandraisana anjara ambany be tao San Felipe i Daniel Duquenal, izay nandresen'i Chávez tamin'ny fitsapankevibahoaka, tamin'ny elanelan'isa kely tamin'ny herintaona. Nanambara ny blaogera iray avy any Barquisimeto fa nomena vola 160$ Amerikana izy mba hifidy ireo kandidà miaraka amin'i Chávez. Araka ny tantarany, nandà izy, fa naka ilay vola ary nandeha nifidy kosa ny iray tamin'ireo namany.
Blaogera maro no maneho hevitra mikasika ilay tsy fisiana vaovao mikasika ny fifidianana androany. Tsy miraharaha ireo vaovao mikasika ny fifidianana ireo fantsona fahitalavitra tsy miankina, ary, mahagaga, kely ny fandrakofana ao amin'ilay fantsona fahitalavitra fehezin'ny governemanta.